कोरोना भाइरसबाट बच्न के गर्ने, के नगर्ने ? – Dangisharan Khabar
दंगीशरण खबर १० चैत्र २०७६, सोमबार १६:२१
१० चैत, काठमाडौं । अहिले विश्वभर कोरोना भाइरसको त्रास फैलिएको छ । यो भाइरसबाट अहिलेसम्म तीन लाखभन्दा धेरै मानिस संक्रमित भइसकेका छन् भने १४ हजारभन्दा धेरैको ज्यान गएको छ ।
नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको प्रवेश भइसकेको छ । फ्रान्सबाट फर्केकी एक नेपाली महिलामा यो संक्रमण देखिएको हो । यसले गर्दा धेरै मानिसहरु डराउन थालेका छन् ।
तर कोरोना भाइरससँग डराउनुभन्दा पनि सतर्कता अपाउनु आवश्यक हुन्छ ।
कोरोनाको संक्रमण नफैलियोस भनेर सरकारले विभिन्न कदम चालेको छ । यस्तो बेला सरकारले गरेको निर्णयहरु पालना गर्दै प्रत्यक्ष व्यक्तिले आफू सुरक्षित हुन आवश्यक सावधानीहरु अपनाउनुपर्छ ।
कोरोनाबाट कसरी सुरक्षित रहने त ? केही सतर्कताका उपाय यहाँ उल्लेख गरिएको छ–
नियमित हात धुने
कोरोना भाइरसबाट बच्ने एउटा उपाय नियमितरुपमा हात धुनु हो । मानिसले विभिन्न सम्पर्कको माध्यमबाट हातमा भाइरसका जीवाणु सारेको हुन सक्छ ।जस्तो कि कसैसँग हात मिलाउँदा, कोरोनाको जीवाणु भएको ढोकाको ह्याण्डल वा कुनै सतहमा छुँदा भाइरसहरु हातमा सर्छन् ।
हात नधोई अनुहारमा छुँदा उक्त भाइरस हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्छन् र त्यसबाट संक्रमण फैलिन्छ । त्यसबाट बच्न बेलाबेलामा साबुनपानीले हात धुनुपर्छ । यसले भाइरसको संक्रमणबाट बचाउन सहयोग गर्छ ।
घर बाहिर ननिस्किने
कोरोना भाइरस कुनै लक्षण नदेखिएका मानिसबाट पनि सर्न सक्ने विभिन्न अध्ययनले देखाइसकेका छन् । कुन मानिसलाई भाइरसको संक्रमण छ भन्ने बाहिरबाट हेरेर थाहा हुँदैन । त्यसैले घरबाहिर निस्किँदा भाइरस आफ्नो शरीरमा प्रवेश गर्ने जोखिम बढी हुन्छ ।
सकेसम्म घरमा नै बस्दा भाइरसबाट बच्न सकिन्छ । बाहिर निस्किनै पर्ने अवस्था आए यथेष्ट सावधानी अपनाउनुपर्छ । भाइरस रोक्ने खालका कपडा र मास्क अनिवार्य लगाउनुपर्छ । अनावश्यक भीडभाडबाट टाढै बस्नुपर्छ भने बाटोमा हिँड्दा पनि अर्को मानिससँग केही दूरी कायम राख्नु राम्रो हुन्छ ।
सार्वजनिक स्वास्थ्य सुझावको पालना
कोरोना भाइरसबाट बच्ने एक महत्वपूर्ण उपाय स्थानीय स्वास्थ सुझावको पालना गर्नु हो । स्थानीय स्तरमा भाइरसको प्रकोप वा जोखिम कत्तिको छ भन्ने आधारमा स्थानीय स्वास्थ्य निकायले सुझाव दिने गर्छ ।
त्यसैले उक्त निकायले दिएको सुझावलाई अनिवार्य रुपमा पालना गर्नाले कोरोना भाइरसबाट बच्न सकिन्छ । नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन सक्ने भन्दै सरकारले सकेसम्म घरमा नै बस्न सुझाव दिइसकेको छ ।
प्रतिरक्षा क्षमता बढाउने
कुनै पनि रोगसँग लड्न मानिसको प्रतिरक्षा क्षमता निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । कोरोना भाइरसले पनि कमजोर प्रतिरक्षा क्षमता भएका मानिसलाई आक्रमण गर्छ ।
त्यसैले यो रोगबाट बच्न आफ्नो प्रतिरक्षा क्षमता बढाउनु आवश्यक छ । त्यसको लागि आफ्नो आनिबानीमा ध्यान दिनुपर्छ । स्वस्थ खाना र स्वस्थ बानीले पनि मानिसको प्रतिरक्षा क्षमता बढाउँछ ।
शान्त रहने प्रयास
यो एउटा कमजोर भाइरस हो । यो भाइरसको संक्रमण भएको खण्डमा पनि आफ्नो स्वास्थ्यको राम्रो स्याहार गरेको खण्डमा निको हुन्छ ।
विश्वभर ३ लाख ३८ हजारभन्दा बढी मानिसमा देखिएको यो संक्रमणबाट करिब १ लाख मानिस निको भएर घर फर्किसकेका छन् भने २ लाख १४ हजारभन्दा बढी मानिसमा यो भाइरसको सामान्य मात्र संक्रमण छ । त्यसैले यो भाइरससँग धेरै डराउनुभन्दा पनि सावधानी अपनाउनु जरुरी हुन्छ ।
Posted in Uncategorized, ब्यानर, विचार/ब्लग, विविध
माना बोक मुरी भिट्त्रैना ब्याला धानम भारी क्षति १० चैत्र २०७६, सोमबार १६:२१
थारु समुदायको दशैं : सेतो टीका र मकैको जमरा १० चैत्र २०७६, सोमबार १६:२१
मौरिपालक महासंघ दाङको अध्यक्षमा श्रेष्ठ १० चैत्र २०७६, सोमबार १६:२१
दङाली युवा नेता मेटमणी चौधरी मन्त्री बन्दै १० चैत्र २०७६, सोमबार १६:२१
रेशम चौधरीलाई छुटाउन थरुहट संघर्ष समिति ‘निर्णायक आन्दोलन’ को तयारीमा १० चैत्र २०७६, सोमबार १६:२१
डश्यक् सख्या गीत १० चैत्र २०७६, सोमबार १६:२१